Ogige Galaxy na-enweta Android 11 n'okpuru Otu UI 3.0 | Gam akporosis
Ogige Galaxy na-anata Android 11 n'okpuru One UI 3.0
Ọgbọ mbụ nke Samsung mbụ mpịachi ama ama amalitela ịnata Android 11 n'okpuru One UI 3.0 tupu oge. Dabere na okporo ụzọ mmelite gam akporo 11 nke ụlọ ọrụ Korea bipụtara na mbubreyo Disemba, a ga-emezi Galaxy Fold mbụ na etiti ọnwa Febụwarị. Otú ọ dị, na mba ụfọdụ dị ka France, United Kingdom na United Arab Emirates, ma ụdị 4G na ụdị 5G dị ugbu a.
Mmelite a na-abịa ụbọchị ole na ole mgbe mmelite natara site na ọgbọ nke abụọ nke Galaxy Fold, the Galaxy Z Fold 2 na na-enye anyị otu ọrụ ọhụrụ ahụ na anyị nwere ike ịchọta n'ụdị nke abụọ nke Galaxy Fold na nke anyị na-ahụ na-egosipụta nkata, ngalaba ọhụrụ iji gụọ mkparịta ụka na mpaghara ngosi, wijetị nke na-enye anyị ohere ịchịkwa usoro mgbasa ozi ...
Thedị ngwa ngwa maka Galaxy Fold 4G bụ F900FXXU4DUA1, ma nke nke 5G version bụ F907BXXUDUA1. Iji lelee ma mmelite ahụ adịla na mba gị, naanị ị ga-aga ntọala ntọala gị, na ngalaba Mmelite Software.
Ọ bụrụ na nke a dị, iji wụnye ya, ọnụ gị ga-enwerịrị ma ọ dịkarịa ala batrị 50%, yabụ ọ bụ ihe amamihe iji mepụta usoro mmelite a n'abalị, mgbe ị ga-akwụ ụgwọ ọnụ gị. Na ọ bụrụ, na mbụ, cheta ndabere.
Thezọ nke Galaxy Fol ga-aga ruo mgbe ọ rutere n'ahịa ọ dị ogologo ma na-agagharị. Izu ole na ole tupu mmalite ahịa nke ihe nlereanya a, usoro mgbasa ozi dị iche iche nwere ohere iji nyochaa ya wee hụ ọtụtụ adịghị ike, ezighi ezi na-akpali site n'eziokwu ahụ bụ na ọ na-egosi mgbanwe nke ọgbọ na ihe ọhụrụ (mgbatị, ihuenyo na-agbanwe agbanwe, ngwa ndị a na-emegharị ...).
N'oge ahụ, Samsung mere mkpebi ziri ezi igbu oge ọnwa ole na ole iji dozie nsogbu ndị isi mgbasa ozi na-akọ, nke nyekwara ya ohere ịrụ ọrụ na ọgbọ nke abụọ zuru oke, dịka mgbasa ozi gosipụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ogige Galaxy na-anata Android 11 n'okpuru One UI 3.0
Etu ị ga-esi mata ngwa ndị na-eme n'obodo gị
Esi nye ọdịdị nke WhatsApp na Telegram gị